२० जना ब्वायफ्रेण्डका आइफोन बेचेर युवतीले किनिन् रातारात यस्तो महल !:: Mero Desh
२० जना ब्वायफ्रेण्डका आइफोन बेचेर युवतीले किनिन् रातारात यस्तो महल !
Published on: २७ आश्विन २०७८, बुधबार २१:५७
एजेन्सी – अहिलेको जमानामा मानिसहरुलाई कोभन्दा को कम भन्ने नशा नै लागेको छ । प्रति स्पर्धाको यो युगमा अघि बढ्न वा चाहेको कुरा प्राप्त गर्नका लागि कोही मा,निसहरुले निकै स्मार्ट तथा इमान्दार बाटो अपनाउँदछन् तर केही मानिसहरु जुनसुकै ह,दसम्म गिर्न तयार हुन्छन् ।
“चीनमा हालै यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । जसमा एक युवतीले घर किन्नका लागि एक दुई होइन २० जना ब्वायफ्रेण्ड बनाइन् । एक पछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ केटाहरुसँग प्रेमको नाटक रची सबैसँग आइफोन सेभेन फुत्काउन सफल भइन् ।
“आफ्ना सबै २० ब्वायफ्रेण्डसँगबाट गरी २० वटा आइफोन हात पार्न सफल भएकी ती यु,,वती अन्ततः एक,,साथ सबै केटाहरुलाई जिल्ल पार्दै छाडिन् ।त्यो रकम घर किन्नका लागि पर्याप्त थियो । शायलीले सोही पैसाले आफ्ना लागि घर ख,रीद गरिन् ।
“आफ्ना बुवाआमा निकै बुढा भएका र आफु लाई जसरी पनि बस्ने घर किन्ने दबाब परेकोले आफु ले त्यस्तो बाटो अपनाएको उनले बताए की छिन् ।अहिलेको जमानामा मानिसहरुलाई को भन्दा को कम भन्ने नशा नै लागेको छ ।
“प्रतिस्पर्धाको यो युगमा अघि बढ्न वा चाहेको कुरा प्राप्त गर्नका लागि कोही मानिसहरुले निकै स्मार्ट तथा इमान्दार बाटो अपनाउँदछन् तर केही मानिसहरु जुनसुकै ह,दसम्म गिर्न तयार हुन्छन् ।
“चीनमा हालै यस्तै घ,टना सार्वजनिक भएको छ । जसमा एक युवतीले घर किन्नका लागि एक दुई होइन २० जना ब्वायफ्रेण्ड बनाइन् ।एक पछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ केटाहरुसँग प्रे,,मको नाटक रची सबैसँग आइफोन सेभेन फुत्काउन सफल भइन् ।
“आफ्ना सबै २० ब्वायफ्रेण्डसँगबाट गरी २० वटा आइफोन हात पार्न सफल भएकी ती युवती अन्ततः एकसाथ सबै केटाहरुलाई जिल्ल पार्दै छाडिन् ।ती युवतीको नाम शायली भएको बताइएको छ ।
“उनले २० वटा आइफोन सेभेन जम्मा पारेसँगै एक मोबाइल फोन बिक्रेता कम्पनीमा लगेर बेचिन् । कम्पनीले उनलाई ती आइफोनको झण्डै १८ हजार डलर बराबरको रकम दियो ।त्यो रकम घर किन्नका लागि पर्याप्त थियो ।
“शायलीले सोही पैसाले आफ्ना लागि घर ख,,रीद गरिन् । आफ्ना बुवाआमा निकै बुढा भएका र आफुलाई जसरी पनि बस्ने घर किन्ने दबाब परेकोले आफुले त्यस्तो बाटो अपनाएको उनले बताएकी छिन् ।